Posted by တန်ခူး at 10:16 AM
အဝေးကီးကို လိုက်မတွေးပါနဲ့အစ်မရယ်။ မောပါတယ်။
စလုံးမှာ နည်းနည်းတော်သေးပါတယ် မ ရယ်.. မလေးးတို့ဆို နောက် ဂျင်နရေးရှင်း ၂ခုလောက်ဆို အမျိုးပြုတ်ပြီ.. သေချာပါတယ်.. ကိုယ်ရွေးတဲ့လမ်းပဲလေ.. မြင်ယောင်နေတယ် မလေးရဲ့ မြေးတွေမြစ်တွေတီတွေ မလေးပုံကိုကြည့်ပြီး အော်.. အိမ်ချမ်းမြေ့ဆိုတာ ဗမာမကြီးပါလား.. ဆိုပြီး
အော်.. မ၊ မလေးရဲ့ကြိုက်တဲ့ဆိုက်ဒ်ကို လင့်ခ်နိုင်ပါတယ်နော်.. ဘလောဂ်တွေဘက်သိပ်မရောက်လို့ ဟိုတခါ မ ပြောထားတာ မပြန်ရသေးလို့
hnin pann so said...
my lovely daughter is so so cute nor...she will be so clever girl like me,, ha ha...if you want to...., pls Q nor..
အမရေ မေ့ကို သတိရသွားပြီ။
ဟုတ်တယ်နော် အမတွေးပူနေတာတွေက ပူစရာတွေပဲ...
မမသားကို မြန်မာ ဗုဒ္ဓဘာသာသင်တန်းတွေလိုမျိုး တက်ခိုင်းပါလား၊ ဘာသာရေး အသိစိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ ကလေးက မဟုတ်တာသိပ်မလုပ်ဖြစ်တော့ဘူး .. တိုပါးရိုးဘုန်းကြီးကျောင်းမှာတွေ့ ဖူးသလိုပဲ
အယ်..သားသားရဲ့ ဒီတစ်ခါ ဂ၇ပ်စ်က တစ်ခါတည်း ထောင်တတ်သွားပါလားကွဲ့း) သားသားရေ့ ဦးဦးတို့တောင်မျက်လုံးတွေပြူးသွားတယ် ဘာတဲ့ သားသားပြောတဲ့ marry ဆိုတာ ဦးလည်း marry ချင်တယ် ဟဟား ။
အစ်မရဲ့ သားအပေါ်ထားတဲ့ မေတ္တာတွေကြောင့် သားကလည်း အရွယ်မရောက်ခင် အဆင်မပြေတာတွေဖြစ်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူး ။ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ဘက်မှာကတော့ပြန်သွားတိုင်းတွေ့မိတာ တစ်ဝမ်းကွဲ ညီ/ညီမလေးတွေက အိမ်ထောင်တွေပြုလို့ သူတို့အသက်လေးတွေက ၁၇ ၀န်းကျင် ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းလေးကတောင် ဆယ်တန်းဖြေထားတဲ့ညီမလေးတစ်ယောက် ယောက်ျားယူသွားတာ သူ့အမျိုးသားလေးက ခုမှ ၉ တန်းတဲ့ ။ စိတ်ကုန်စရာကြီး ။အဲ့အကြောင်း အမေနဲ့ဖုန်းပြောဖြစ်တုန်းက ပြောမိတော့ အမေကရယ်ပြီး `ငါ့သားကတော့ လူပျိုကြီးဖြစ်မှာပဲ´ တဲ့ အဲ့တာလည်းကောင်းပါတယ်နော့်း)
ယောကျားလေးလဲယောကျားလေးမို့ပူရတာပဲ .. မိန်းကလေးလည်းမိန်းကလေးမို့ ပူရပြန်ရော .. မိဘလုပ်ရတာ မလွယ်ဘူးနော် ..း( ကြောက်တောင်ကြောက်တယ် ..
အမမျှော်လင့်သလို ဘာသာလူမျိုးတူတဲ့ ယဉ်ကျေးလိမ်မာတဲ့ သမီးလေးမျိုးကို ချွေးမတော်နိုင်ပါစေ ..း)
တန်ခူးရေ သိပ်အဝေးကြီး လှမ်းမပူဖို့ မွန့်လိုပဲ ကော်မန့်လိုက်ပါတယ်။
တန်ခူးတို့ သားအမိ အိမ်လာလည်အောင် ရေချမ်း၊ ရေစင်တို့ရဲ့ ညီမထွေး ရေအိုးလေး တယောက်လောက် မွေးလိုက်ပါဦးမယ်...(ချစ်လို့ စ,တယ်မှတ်)
ဒီမှာလဲ သားရှင်ပါ။ဟိုတစ်လောက အိမ်ဘေးကပန်းခြံမှာ နေကျာင်းသားအတွဲလေးတွေ တွေ့တော့ သားအဖေက်နင့်သားကြီးလာရင်အဲလိုပဲဖြစ်မှာတဲ့။
ကိုယ့်မှာမခံနိုင်လို့ ဒီမှာရှိတဲ့ ခလေးတိုင်းလည်းဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးလို့။
အသိထဲမှာ သားကြီးလာရင် မေမေ့ကိုယူမယ် လို့ပြောတဲ့ ကလေးတစ်ယောက်တွေ့ဖူးတယ်...။ ယူတယ်/လက်ထပ်တယ် ဆိုတာတွေနားမလည်သေးတော့ သူချစ်တဲ့ အမေနဲ့ တူတူနေရအောင် ပြောတာလေ..။
စာများများ ဖတ်ခိုင်း။ လူများများနဲ့ ပေါင်းခိုင်းပေါ့ အစ်မရယ်။ နှလုံးသားရေးရာ ကိစ္စကတော့ ဘယ်တတ်နိုင်မလဲ။ ဖူးစာလို့ပဲ သဘောထားလိုက်ပါ။
အင်း.. မတန်ခူးပြောတာနဲ့ဆို ... သား ၃ ယောက် ဖခင် ကျနော့်ကို သမီးရှင်တွေ အပေါင်းအသင်း လုပ်ကြတော့မှာ မဟုတ်ဘူး... ဘာလို့ဆို ကျနော်ကလည်း မုန့်ဆီကျော်က ဘယ်မှာမှန်း မသိ ဆိုသလိုမျိုး အဲလိုမျိုးတွေးနေမိတာလေ... ကိုယ့်သားတွေကို ဗမာ မကလေးတွေနဲ့ပဲ အိမ်ယာ ထူထောင်စေချင်နေတာ... ကိုယ့် သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ သမီးလေးတွေဆို ခုကတည်းက ဘယ်ကလေးက ဘယ်လိုဆိုတာ ကြည့်နေမိတာ...း) ခက်တော့ နေတာပဲ...
အမက သားသား ရှေ့ရေးအတွက် စဉ်းစားပေးတာ သူတစ်နေ့တော့ နားလည်မှာပါ အမရယ်.. အဲဒီမှာကမှ မြန်မာ အသိုင်းအ၀ိုင်းရှိလို့ မြန်မာချွေးမရဖို့ နီးစပ်နိုင်ပါသေးတယ်။ ဒီမှာတော့ မြန်မာမိသားစု ရှားတယ် အမ.. :(
(အမတွေးသလို လိုက်တွေးပြီး ပူပင်နေတာ မုန့်ဆီကြော်ကတော့ ဘယ်မှာမှန်း မသိသေးဘူး.. ;P)
နေ့လယ်ခင်း အခြားကျောင်းသားတွေ ကျောင်းတက်နေချိန်မှာ ကျောင်းနဲ့ မလှမ်းမကမ်းက တောင်ကုန်းစိမ်းစိမ်းလေးပေါ်မှာ ကောင်လေးနဲ့ကောင်မလေးစုံတွဲ ပေါက်စလေးတွေ။ အောင်မယ် ကျောခင်းကပ်ပြီး မှီထိုင်နေကြတာ နေပူထဲမှာ လသာတယ်ထင်နေလားမသိဘူး။
သားရှင်တို့အတွက် မဟောသဓလို မိန်းမအရှာထွက်ရင် ပိုအဆင်ပြေမယ်။ အရွယ်ရောက်လို့ ယူသင့်တဲ့အချိန် မြန်မာပြည် ပြန်လွှတ်လိုက် အိမ်ထောင်ဖက်တွေ့မှ ပြန်လာခဲ့ဆိုပြီး ပြောလိုက်...
ဖတ်ပြီး သဘောတကျ ပြုံးမိပါတယ်။ သားသားအကြောင်းတွေ ဖတ်ရရင် ဒီလိုပဲ ပြုံးနေကျ။ မမ အတွေးလေးကိုလည်း သဘောပေါက်မိပါတယ်။
I want to marry..... ဆိုပြီး အဖေနဲ့ အမေကို ပြုံးဖြဲဖြဲကြည့်ပြီး သွေးတိုးစမ်းစကားဆိုနေမယ့် သားသားပုံစံကိုလည်း ရီချင်မိတယ်။
Lost Myanmar- National- Identity generation..?
Enjoy S'pore citizen Life..!!!
Who is to Blame...initially..???
How to Define Myanmar Educated people..???
To love their Own-Country...??
Hi Ma Tha ku,
Here i do not like is less understanding. they rarely think other side feeling and can say that selfish. i worry that my generation will go to that kind of way.... Most important is enviroment, here enviroment is like that.. i really worry.... :(
Don't say complain to Developed country of your 2nd home Singapore or etc.....
If you can' catch the modern living life style of globalized country..
If you can't teach your very own babies to great attitudes of your own generation good natures ..
who is the one responsible for all these to complain...?
သမီးရှိတဲ့ အိမ်တွေချည်းပဲ မသွားပါနဲ့...
ကိုယ့်အိမ်ကိုလဲ လာလည်ပါတန်ခူးရယ်.. နော်...
မုန့်တွေ အများကြီး ကျွေးပါ့မယ်...
ဂျူးရဲ့ တဦးတည်းသောသား ဝတ္ထုလဲ ပေးဖတ်ပါ့မယ်...
ပြီးတော့ လုံလောက်တဲ့ နားလည်မှုတခုအတွက် အတူတူ အားမွေးကြည့်ကြတာပေါ့နော်...။
အပေါင်းအသင်းဆိုတာ အခုအရွယ်မှာ အရမ်းအရေးကြီးတယ်ဗျ...
မြတ်နိုး သမီးလေးမွေးမယ်။ သဘောတူလားးးး
အော် သားရှင်သားရှင်.. သမီးရှင်များလည်း ရင်လေးကြပါတယ်ရှင်.....
တန်ခူးရေ ... လာဖတ်သွားတာကြာပြီ ... အချိန်မရလို့ မမန့်လိုက်ရဘူး။
အတူတူပါပဲ။ သမီးကလဲ အောက်ထပ်မှာ မလေးတွေ မင်ဂလာဆောင်တာ ခဏခဏတွေ့နေရတော့ အဲဒီစကား ခဏခဏပြောတယ်။ ၂နှစ် ၃နှစ်ကတည်းက မင်ဂလာဆောင်တယ်ဆိုတာ ပြောတတ်နေပြီ။ နားမလည်သေးတော့ မေမေနဲ့ ဂျူဂျူနဲ့ မင်ဂလာဆောင်မယ်တွေဘာတွေ တောင်ပြောနေလို့ မနဲရှင်းပြထားရတယ်။
ခုခေတ်သားရှင်ဆိုတော့ ...ညက်နှာပွင့်တာပေါ့နော် ... လို့း)))
အိမ်လာလည်လို့ရတယ်နော်….းးး)))
ဟုတ်တယ်မွန်ရေ… အဲဒီလိုတွေ အဝေးကြီး လိုက်လိုက်ပူတတ်လို့လူလဲ တနေ့ တခြား အဖွားကြီးရုပ်ပေါက်ပေါက်လာတယ်… မမွေးပဲနဲ့ တော့ မနေပါနဲ့ ညီမရယ်… ကြည်နူးစရာလေးတွေလဲ ရှိပါသေးတယ်… အိမ်ဆည်းလည်းလေးတွေလေ…
အိမ့်ရေ…. အင်းးးးး… ဟုတ်ပါရဲ့နော်… အိမ့်ကော်မန့် လေးဖတ်ပြီး ပိုငိုင်သွားမိတယ်…
အိမ့်ချမ်းမြေ့ဒေါ့ကွန်းကို လင့်ခ်မှာအိမ့်ရေ… ဟိုတပတ်ကသားနေမကောင်းလို့မလုပ်ဖြစ်လိုက်ဘူး… ဒီဘက်မှာ အသစ်မတွေ့ လို့ စိတ်ထဲမှာတော့ သတိတွေရနေတာ…
နှင်းပန်းရေ…. Qလိုက်ပြီနော်… နံပါတ်ဘယ်လောက်လဲ…
ရွာသားလေးမေမေက အမလောက်မပူရတော့ပါဘူး… ချွေးမလောင်းလေးက မြန်မာမလေးဖြစ်မှာ သေချာနေတာကို… (ဖွလိုက်တာ..ဟိ)
ညီမနွေးရေ… သားကို တိုးပါးရိုးက Sunday School(ဗုဒ္ဓဘာသာသင်တန်း) ပို့ တယ်ညီမရဲ့… သားကို နေကုန်ကျောင်းပြောင်းလိုက်တော့ ပင်ပန်းလို့ ဆို ခဏနားထားတာ… နောက်လထဲလောက် ပြန်ပို့ ဖြစ်လိမ့်မယ်… အမရဲ့ ကကာကားဆိုတဲ့ ပို့ စ်လေးက အဲဒီအကြောင်းရေးထားတာလေ…
မောင်မျိုးရေ… ပိုပိုသိလာလေ ပိုပိုတွေးမိလေပေါ့… ပိုပိုတွေးမိလေ အိမ်ထောင်မပြုဖြစ်လေဖြစ်မှာ… လူပျိုကြီးတော့မလုပ်ပါနဲ့ လေ... ပျင်းစရာကြီး… ဖိုးဖိုးမျိုးဖြစ်ရင် ပြုစုမယ့်သူ မရှိပဲ ဖြစ်နေဦးမယ်…
လိုချင်တဲ့ဆုကို တောင်းပေးတာ ကျေးဇူးပါနော်… ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ပါစေ မောင်လေးမိုးခါးရေ…
ဟိဟိ… အဲဒါကြောင့် မရောက်တာ မဟုတ်ပါဘူး မ ရေ… အိမ်ချင်းလဲ လှမ်းလို့ ပါ… ရေအိုးလေး တကယ်မွေးမယ်ဆိုရင် အိမ်နီးနီးပြောင်းလာမှထင်တယ်….
ဟုတ်ပါတယ် ကျော့ရေ… သူများဖြစ်ပေမယ့် ကိုယ့်ကလေးက အဲဒီလို ဖြစ်ချင်မှ ဖြစ်မှာပါ… လမ်းကြောင်းတည့်ပေးရမှာပေါ့လေ…
စင်စင်ရေ… ဒါကြောင့် အမက အိမ်မှာ အမှတ်မှားမှာစိုးလို့အဲဒီလို စကားလုံးမျိုးတွေကို မပြောဖြစ်အောင်ရှောင်တယ်…
ဟုတ်ပါတယ်ZTရေ… တွေးတတ်အောင် လေ့ကျင့်ပေးရမှာပေါ့… ကိုယ့်လူမျိုးယဉ်ကျေးမှုတွေနဲ့မစိမ်းအောင် မိတ်ဆက်ပေးရမှာပေါ့... အင်းလေ… ဖူးစာဆိုတာလဲ ပြောရခက်သားလား
ကိုအောင်သာငယ်ရေ… ဟိဟိ… မြွေမြွေချင်း ခြေမြင်တယ်နော်…
နုရေ… ဘာမှ မပူနဲ့ ညီမ… သမီးလေးမွေးပြီး အမတို့ ဆီသာ ပြောင်းလာခဲ့…(စတာနော်)..
သားနဲ့ က အဲဒီလိုပဲ ညီမရီတာရေ… တခါတလေ ငိုအားထက် ရယ်အားသန်… မပျင်းရဘူးလေ…
သြော်… သမီးရှင်…သမီးရှင်… တိတ်တိတ်လေး လာဖတ်လဲ ဒီကသားရှင်က မျက်စိရှင်တယ်ဆရာ…
Anonymousရေ… Anonymousရဲ့ကော်မန့် လေးဖတ်ပြီး ဟိုတနေ့ က သူငယ်ချင်းတယောက် အီးမေးလ်ပို့ လိုက်တဲ့ Power point ထဲက စာသားလေးတချို့ ကို သွားသတိရမိတယ်… ဖတ်ကြည့်ပါဦးနော်
“What we see when watching others, depends on the purity of the window through which we look.
Before we give any criticism, it might beagood idea to check our state of mind and ask ourselves if we are ready to see the good rather than to be looking for something in the person we are about to judge” တဲ့။ လူတိုင်းလူတိုင်းဟာ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ကိုယ့်တိုင်းပြည်နဲ့ခွဲနေကြရပေမယ့် ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကို ရင်ထဲအသဲထဲက လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ချစ်မြတ်နိုးနေကြမှာ ကျွန်မကျိန်ဆိုရဲပါတယ်။ ဒါနဲ့Anonymousသိအောင်ပြောပြရရင် ကျွန်မတို့တမိသားစုလုံးဟာ မြန်မာပတ်စ်ပို့ ကို ကိုင်တွယ်ထားတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေပါ… Singapore citizen မဟုတ်ပါဘူး… တကယ်လို့မြန်မာSingapore citizen တယောက်က ဒီလိုပို့ စ်မျိုးလေး ရေးခဲ့ရင်လဲ ကျွန်မက သူတို့ ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံပေါ်ချစ်တဲ့ သံယောဇဉ်ကို ကိုယ်ချင်းစာလို့နားလည်ပေးမိမှာပါ… ပြီးတော့ အဝေးရောက်မြန်မာတွေအားလုံး ကိုယ့်နိုင်ငံကို တတ်နိုင်တဲ့နည်းက ကူညီစောင့်ရှောက်နေကြတယ်ဆိုတာ မနှစ်က နာဂစ်တုန်းက ကူုညီခဲ့တဲ့ ဥပမာက အတော်သိသာထင်ရှားတဲ့ ဥပမာပါ… ခုလို ကျွန်မပို့ စ်ကို တခုတ်တရဖတ်ပြီး ကော်မန့် ပေးတာ ကျေးဇူးပါရှင်…
Life is for success ရေ… ကျွန်မလဲ အဲဒီလို မြင်မိတယ်… အဲဒီလို ပူမိတယ်… အားလုံးမဟုတ်ပေမယ့် အများစုက အဲဒီလို ဖြစ်နေကြတာမိုလား… အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ကြိုးစားရမှာပေါ့လေ…ကိုယ့်သားသမီးကို မြန်မာပတ်ဝန်းကျင်မှာ များများကျင်လည်အောင် ကြိုးစားရမှာပေါ့… ကျွန်မသားဆို ပက်နင်ဆိုးလားရောက်ရင် သိပ်ပျော်တာ… ဦးဦးတွေ ဒေါ်ဒေါ်တွေက မြန်မာတွေချည်းဆိုတော့ သိသိမသိသိ သူစကားပြောချင်တဲ့သူ သွားပြော၊ သူရယ်ပြချင်တဲ့သူရယ်ပြနဲ့ဟုတ်နေတာပဲ….
Anonymousရေ… မိဘဆိုတာ သားသမီးရဲ့ လက်ဦးဆရာမို့သားသမီးကို နည်းလမ်းမှန်ကန်အောင် ဆုံးမဖို့တာဝန်အရှိဆုံးဆိုတာ မှန်ပေမယ့် ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုကိုလဲ သတိတော့ ထားရပါမယ်… ကိုယ့်ယဉ်ကျေးမှု၊ ကိုယ့်ဓလေ့ထုံးစံတွေနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ကွဲလွဲနေတဲ့ အခါ နားလည်အောင် စိတ်ရှည်ရှည်ထားပြီး ဆုံးမသွန်သွင်ရမှာပါ…
သက်ဝေရေ… လာလည်မယ်လေ… အိမ်အသစ်ကိုနော်… သားက ကိုကိုကြီးကြီးတွေဆီ သွားရတာ သိပ်ပျော်တာ… ဟုတ်တယ်… လုံလောက်တဲ့နားလည်မှုအတွက် အတူအားမွေးဖို့သက်ဝေဆီ လာခဲ့မယ်နော်…
ဟုတ်ပါတယ်… ကိုလူထွေးရေ… အပေါင်းအသင်းက သိပ်ကို အရေးကြီးပါတယ်… ခုလို လာလည်တာကျေးဇူးပါ… နောက်လဲလာလည်ဖို့ဖိ်တ်ခေါ်ပါတယ်…
မြတ်နိုးရေ… မေးနေစရာတောင် မလိုဘူး… သဘောတူပြီးသား… မြန်မြန်သာ အကောင်အထည်ဖော်ပေတော့…
မမရေ… တူမလေးက ဘယ်အရွယ်ရောက်ပြီလဲ… ဒီကိုရော အလည်လာသေးလား… ရန်ကုန်ဘယ်နားလေးနေတာလဲ… ဒီတခါပြန်ရင် သားကိုအလည်ပို့ … ဟုတ်ပါဘူး… တန်ခူးသွားလည်ချင်လို့ ပါ…
ဆွိရေ… ဟုတ်တယ်နော်… အဲဒီလိုတွေက ရှင်းပြရတာ သိပ်လက်ပေါက်ကပ်တာ… အဲလိုကြီးလဲ မျက်နှာမပွင့်လှပါဘူး သယ်ရင်းရယ်… တကယ်ဆို သယ်ရင်းတို့ အိမ်လဲ လာလည်ချင်တဲ့အထဲပါတယ်… ဟိဟိ….
စိတ်ချ… လာလည်မှာHtayရေ… အတွေးချင်းတူနေလား… ဒါဆို Okပြီ… ဟိဟိ… ရှုးးးးးးးးးးးးးးးးးး…. ရှင်းဖေဖေသိစေနဲ့ … ကြောက်လို့ ….
ခရီးက ခုမှ ပြန်လာလို့ ဒီပို့စ်လေး လာဖတ်တာ နောက်ကျသွားတယ် အမရေ။
အမ သားလေးအကြောင်းရေးတိုင်း မိဘမေတ္တာနဲ့ ထုံသင်းနေတာမို့ ဖတ်တိုင်း ကြည်နူးရတယ်။
အမ ရှင်းမပြလဲ အမရင်ထဲက တိုင်းပြည်အပေါ်၊ သားအပေါ်ထားတဲ့ မေတ္တာတွေ နားလည်ပြီးသား။ ခံစားလို့ ရပြီးသား။ ဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာ သားသမီးကို ကိုယ့်ဖြစ်စေချင်တာလေး လိမ်လိမ်မာမာနဲ့ တည့်မတ်ပေးချင်တဲ့ စိတ်ကလေးကို လှစ်ကနဲ မြင်လိုက်ရတယ်။
ချိုသင်းမှာ သမီးတော့ မရှိ၊ တူမတွေတော့ ရှိတယ်။ တူမတွေကလဲ အဒေါ်လို ချစ်စရာ ကောင်းကြပါတယ်။ (ကြော်ငြာ ၀င်လိုက်ပါတယ်)